बैंकमा तरलता अभाव किन ? किन ब्याजदर बढाउँदै बैंक ?
| 2017-12-29 Published
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | भर्खरै सम्पन्न चुनावलगत्तै बैंकहरुले तरलताको अभाव भएको हौवा पिटाइरहेका छन् । साथै महँगो ब्याज कबुलेर पैसा उठाउने तथा कर्जा प्रवाह समेत रोक्न थालेको छन् ।
केही बैंकले कर्जा प्रवाह पूर्ण रुपमा रोकेका छन् भने केहीले ‘स्लो डाउन’ गरेका छन् ।
जसले गर्दा पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेर भूमिका निर्वाह गर्ने निर्माण व्यवसायी, उद्यमी तथा देशको अर्थतन्त्रमा समेत प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ ।
बैंकहरुले सेवाप्रदायक रुपमा कर्जा उपलब्ध गराउनुको सट्टा अनियमित ढङ्गले ब्याजदर बढाउनका साथै कर्जा प्रवाह रोक्दा कर्जा लगानीसमेत प्रभावित भएका छन् ।
यसैगरी, पछिल्लो समयमा बैंकहरूले निक्षेपका लागि ब्याजदरसमेत बढाएर तान्ने खेल सुरु गरेपछि कर्जा लगानीसमेत प्रभावित भएको छ ।
बैंकहरूसँग कर्जा लगानी गर्नका लागि निक्षेप लिनुपर्ने अवस्था छ । हाल बजारमा नयाँ निक्षेप नआएपछि बैंकहरूले ब्याजदर बढाउने नीति लिएको देखिन्छ ।
ब्याजदर बढाएर बैंकहरूले निक्षेप अकार्षण गर्न थालेको छन् । वित्तीय प्रणालीमा देखिएको यस्तो समस्या अझै सोही प्रक्रियामा कायम रहे समस्या झनै बढेर जाने देखिएको छ ।
ब्याजदर बढाएपछि बैंकहरुले तरलतामा केही समय सहजता पाएपनि दिगो रुपमा सो प्रक्रिया समाधान भने पक्कै होइन । बैंक प्रणालीको यस समस्या सुधारमा बैंकहरु सच्चिन जरुरी छ ।
के कारण बैंकमा तरलता अभाव ?
– एनसेलले लाभांस बापतको रकम लग्ने जानकारी गराएपछि कमर्सियल बैंकहरु आत्तिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले एनसेललाई लाभांस लैजाने बाटो खोलिदिएपछि ठूलो रकम बोकेर बसेका बैंकहरु तरलतामा कमि आउने डरले तर्सिएका हुन् ।
यसकारण बैंकहरु महँगो ब्याज कबुलेर पैसा उठाउन तथा कर्जा प्रवाह रोक्न थालिसकेका छन् ।
एनसेलले चार आर्थिक बर्षको लाभांस लैजान बाँकी छ । यसअघि एनसेलले २०६८/६९ को लाभांस वापत ८ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ लगेको थियो । त्यस अवधिदेखि भने लाभांस रोकिएको थियो ।
एनलसेलले लाभांस लैजान सक्ने भन्दै अदालतले फैसला सुनाएपछि उसले सम्बन्धित बैंकहरुलाई रकम तयार पार्न जानकारी गराएको हो ।
– सरकारले संघीय व्यवस्था कार्यान्वयन तथा चुनावका लागि आन्तरिक ऋण १ सय ९ अर्ब रुपियाँ उठाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले उठाएको आन्तरिक ऋण तथा चुनावमा खर्च भएको पैसा वित्तीय प्रणालीमा नआएपछि पनि समस्या बढ्दै गएको हो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ४५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने योजना गरेकोमा पहिलो त्रैमासमा नै १ खर्ब ९ अर्ब उठाइसकेको छ । तर, त्यो रकम खर्च गर्न नसक्दा समस्या बढेको हो ।
सरकारले स्थानीय तहमा २ किस्ता गरी १ खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ निकासा दिएको भए पनि वाणिज्य बैंकहरूमा नआएको हुनाले समस्या देखिएको बैंकका सिइयोहरु बताउँछन् ।
पछिल्लो समयमा व्यवसायीले समेत कर्जा पाउन हम्महम्मे परेको छ । बैंकहरूसँग कर्जा दिनका लागि आवश्यक नयाँ निक्षेप अभाव हुँदा व्यवसायीहरू पनि बैंक प्रणालीको समस्या सुधारको पर्खाइमा छन् ।
यता ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौड्यालले भने वित्तीय प्रणालीको अवस्थाअनुसार सहज कर्जा दिने अवस्था नभएपछि बैंकले समय माग्नु सामान्य रहेकोे बताउँछन् ।
वित्तीय प्रणालीमा कर्जा प्रवाहअनुसारको निक्षेप सिर्जना हुन नसक्दा समस्या देखिएको सिइओ पौड्यालले बताए ।
यसका लागि सरकारले पैसा जम्मा नगरि निरन्तर खर्च गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । हाल वित्तीय प्रणालीको पुँजी कर्जा तथा निक्षेप अनुपात ७९ प्रतिशत रहेको छ ।
समग्र प्रणालीको पुँजी कर्जा तथा निक्षेप अनुपात ७९ प्रतिशत भनेको कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्था नरहेको हो । त्यसका साथै बैंकहरूले नयाँ निक्षेप सिर्जना गर्न नसक्नुका कारणले वित्तीय प्रणालीमा समस्या आएको पौड्यालको भनाइ छ ।
पछिल्लो समयमा बैंकको निक्षेप सहकारीतर्फ गएको हुनसक्ने पौड्यालको भनाइ छ । ‘यसले ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा असर गर्ने देखिन्छ’ उनले भने यो भनेको डरलाग्दो अवस्था हो ।’
बैंकहरूले वित्तीय प्रणालीमा कर्जायोग्य रकम अभाव भएको भनिए पनि यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक भने असहमत रहेको छ ।
‘हाल वित्तीय प्रणालीमा करिब ३४ अर्ब तरलता रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।
सोहीकारण वित्तीय प्रणालीको अवस्था सामान्य रहेको बताउँदै ती अधिकारीले भने, केही बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको हुनसक्ने भए पनि प्रणालीमा नै समस्या रहेको छ ।
बैंकहरू आत्तिएर ब्याजदर बढाएर निक्षेप तानेको हुनसक्ने राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ ।
शुक्रबार, १४ पुष ०७४
साना किसान वित्तीय संस्थाको साधारण स�...
एनएमबि बैंकको ११० औँ शाखा सप्तरीको ति�...
मेगा बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्षमा शा�...
सनराइज बैंकको शाखा धुर्कोटमा पनि !...
सनराइज बैंकको शाखा अब धनकुटामा पनि...
सनराइज बैंकले सुरु गर्यो ‘सुरक्षित अ�...
एनएमबी–एनसीएचआरसी बिच सम्झौताः एनएम�...
पाशुपत क्षेत्रमा सनराइज बैंकको काउन्...